Warshada Karootada - Soosaarayaasha Karootada iyo Alaab-qeybiyeyaal
Sharaxaada wax soo saarka karootada: Qiyaas ahaan. 5-7 karootada halkii kiilo - laakiin tirada dhabta ah way kala duwanaan kartaa. Karootada waxaa loo cuni karaa ceyriin ahaan sida cunnooyinka fudud, ama waa la kariyaa waxaana loo isticmaali karaa macaan iyo qaar ka mid ah suxuunta macaan, sida keega dabacasaha ama muufada Waa la kariyey, la kariyey, la dubay, la dubay, la dubi karaa, la shiidi karaa ama microwave. Karootada waa in la kariyaa illaa ay jilicsan yihiin laakiin wali wax yar bay isku urursan yihiin. Ama kariyo karootada illaa ay jilicsan yihiin oo milix ama nadiifi. Karootada ayaa ah isha khudradda ee ugu qanisan fiitamiin a, laga bilaabo beta-carotene. Hal karooto oo dhexdhexaad ah ayaa bixisa in ka badan inta lagu taliyay in la qaato maalintii. Karootada sidoo kale waa isha laga helo fiber-ka cuntada, fiitamiin c iyo niacin.